Galmeewwan kuusdeetaa haaraaf gatiilee ofumaan yeruma sana maddan filanna isaanii adda baasa.
Jiraachuun to'annoo armaan gadii gosa kuusdeetaa irratti hundaa'a:
LibreOffice kakaasuun ofmaa dabalama dirree deetaaf kan madda deetaa ODBC ykn JDBC gargaara. Yoo ofmaan dabalamuun amala baqqaana SDBCX gargaaramuu baate filannoo kana filadhu. Walumaagalatti, ofmaan dabalamuun dirree furtuu dursaatiif filama.
Adda baaftuu ajaja SQL akka madda deetaa ajajee itergaan dirree deetaa akka ofiin of dabaluuf galchi. Fakkeenyaaf, himni MySQL kanaa gadii AUTO_INCREMENT fayyadamee dirree"id" dabaluuf yeroo mara dirree deetaa uumuuf fayyada.
Fakkeenya kanaaf, saanduqaa AUTO_INCREMENT jedhu Hima ofnaa-dabalametti galchi.
Title is: Gatii Madde